Ny fetin'ny Pentekosta izay misy dikany dia mampatsiahy antsika fa ny fiangonana kristiana voalohany dia nasiana tombo-kase tamin'ny Fanahy Masina. Ny Fanahy Masina dia nanome ny mpino hatrizay ary isika tena olom-baovao. Miresaka momba io famantarana vaovao io aho androany. Misy ny olona manontany tena amin'ny tenany hoe: afaka mandre ny feon'Andriamanitra ve aho, ny feon'i Jesosy, na ny fijoroana ho vavolon'ny Fanahy Masina? Mahita valiny isika ao amin'ny Romana: «Satria tsy manana ...
Nitsidika ny zanakay vavy sy ny fianakaviany vao haingana izahay. Novakiako tao amin'ny lahatsoratra iray ilay fehezanteny hoe: "Ny fahafahana dia tsy ny tsy fisian'ny fameperana, fa ny fahaizana manao azy nefa tsy noho ny fitiavana ny namana." (Factum 4/09/49). Ny fahafahana dia mihoatra noho ny tsy fisian'ny sakana! Efa naheno toriteny momba ny fahafahana isika, na efa nianatra ity lohahevitra ity ihany. Ny zavatra manokana ho ahy amin'ity fanambarana ity, na izany aza dia ny fahalalahana miaraka amin'ny fandavana ...
Mametraka fanontaniana amin'ny tenako momba ny toriteny anio aho: "Mivavaka ho an'Andriamanitra ve aho sa amin'i Jesosy?" Ny valin'ireo teny ireo dia nanova ny fiainako ary afaka manova ny fiainanao koa izany. Asa raha manandrana miaina ara-dalàna tanteraka amin'Andriamanitra aho na manaiky ny fahasoavan'Andriamanitra tsy misy fepetra ho fanomezana tsy mendrika avy amin'i Jesosy. Raha hambara mazava tsara, - Miaina miaraka amin'i Jesosy sy amin'ny alalako aho. Tsy azo atao ny manazava ny lafiny fahasoavana rehetra amin'ity toriteny iray ity ...
Fanoharana malaza momba an’i Jesosy: Nisy olona roa nankany amin’ny tempoly mba hivavaka. Ny iray Fariseo, ny iray mpamory hetra (Lioka 18,9.14). Amin’izao andro izao, roa arivo taona taorian’ny nilazan’i Jesosy io fanoharana io, dia mety halaim-panahy handohalika amim-pahalalana isika ka hilaza hoe: “Indro, ry Fariseo, ohatra ny fanamarinan-tena sy ny fihatsarambelatsihy!” andramo sary an-tsaina hoe ahoana ny fanoharana nataon’i Jesosy...
Androany amin'ny Krismasy, miatrika ny "fiadian'Andriamanitra" isika ao amin'ny taratasy ho an'ny Efesiana. Ho gaga ianao amin'ny fomba ifandraisan'izany amin'i Jesosy, ilay Mpamonjintsika. I Paoly no nanoratra an'io taratasy io tany am-ponja tany Roma. Nahatsapa ny fahalemeny izy ary nametraka ny fitokisany rehetra an'i Jesosy. “Farany, mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny heriny. Misintaha ny sandrin'Andriamanitra mba hiatrehana ny fanafihan'ny devoly ”
Androany dia tiako hampirisika anao hanaraka ny fananarana nomen’i Paoly ny fiangonana Filipiana. Nangataka azy hanao zavatra izy ary hasehoko anao ny mikasika izany, ary hangataka anao hanapa-kevitra ny hanao toy izany koa ianao. Jesosy dia Andriamanitra tanteraka ary olombelona tanteraka. Andininy hafa izay miresaka ny fahaverezan'ny maha-Andriamanitra azy dia hita ao amin'ny Filipiana. «Satria ao aminao ity saina ity, izay tao amin'i Kristy Jesosy, izay, fony izy tao an ...
Zu Beginn dieser Predigt steht die Notwendigkeit zu verstehen, dass alle Menschen seit Adams Zeiten Sünder sind. Um vollständig aus Sünde und Tod befreit zu werden, brauchen wir einen Mittler, der uns aus Sünde und Tod erlöst. Jesus ist unser vollkommener Mittler, denn er hat uns durch seinen Opfertod vom Tod befreit. Er hat uns durch seine Auferstehung neues Leben geschenkt und mit dem himmlischen Vater versöhnt. Wer Jesus als seinen persönlichen Mittler zum Vater…
“Ary ankehitriny mananatra anareo aho, ry rahalahy, noho ny famindram-pon’Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, ​​masina, sitrak’Andriamanitra. Aoka izany ho fanompoam-pivavahana araka ny antonony.” (Romana 12,1). Izany no lohahevitr’ity toriteny ity. Voamarikao tsara fa misy teny tsy ampy. Ankoatra ny fivavahana araka ny antonony, ny fanompoam-pivavahana ataontsika dia ara-dalàna. Io teny io dia avy amin'ny teny grika hoe "logiken". Ny fanompoana ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia...
Ny Filazantsaran’i Jaona dia mitantara tantara mahaliana izay nitranga tamin'ny fiandohan'ny asan'i Jesosy teto an-tany: nandeha tamin'ny fampakaram-bady izy izay namadika ny rano ho divay. Ity tantara ity dia tsy fahita amin'ny fomba maro: ny zava-nitranga dia toa fahagagana kely, toa ny fanaovan-tena toy ny majika fotsiny. Na dia nanakana toe-javatra somary mahamenatra aza izany dia tsy mifanohitra mivantana amin'ny ...
Taona maro lasa izay dia nahare hafatra voalohany aho, izay nampionona ahy matetika. Mbola eritreretiko ho hafatra tena lehibe avy amin'ny Baiboly io. Ny hafatra dia izao: Andriamanitra hamonjy ny zanak'olombelona rehetra. Nanomana fomba hahazoan'ny olon-drehetra ho voavonjy Andriamanitra. Manatanteraka ny drafiny izy izao. Andao aloha hijerentsika ny lalan'ny famonjena amin'ny Tenin'Andriamanitra. ...
Ny teny filamatra amin'ny Street Parade any Zurich anio dia: "Dihy ho an'ny fahalalahana". Mamaky toy izao ao amin'ny tranokalan'ny hetsika izahay: “Ny Street Parade dia fampisehoana dihy ho an'ny fitiavana, fihavanana, fahalalahana ary fandeferana. Miaraka amin'ny teny filamatr'ilay Street Parade "Dance for Freedom", nataon'ireo mpikarakara ny fahalalahana ho loha laharana ". Ny faniriana ny fitiavana, ny fandriampahalemana ary ny fahalalahana dia ahiana mandrakariva amin'ny zanak'olombelona. Mampalahelo fa miaina ao anatin'ny tontolo tena ...
Ny fiarahamonina ankehitriny, indrindra eo amin'ny tontolon'ny indostrian'ny fanatanjahantena dia iharan'ny tsindry: ny ankamaroan'ny olona dia mahatsapa hatrany ny faneren'ny zavatra iray. Mijaly ny olona amin'ny fotoana voafetra, fanerena hanatontosa (asa, sekoly, fiaraha-monina), fahasahiranana ara-bola, tsy fandriampahalemana amin'ny ankapobeny, fampihorohoroana, ady, loza mahatsiravina amin'ny andro, manirery, tsy misy fanantenana, sns, sns .. Ny fihenjanana sy fahaketrahana dia lasa teny isan'andro, olana, aretina…